Home » Vaovao momba ny fahasalamana » Ny Scandalia momba ny vaksinin'ny EU dia manana mpandresy telo lehibe: San Marino, Russia, ary Sputnik
Vao lasa mpilalao manerantany amin'ny politika Rosiana Andrefana ny Repoblikan'i San Marino, ary momba ny fanaovana vaksiny ny olom-pirenenan'ity firenena ity izay manohitra ny politikan'ny EU ho firenena tsy EU iray voahodidin'i Italia. mpikambana ao amin'ny Vondrona eropeana.
Na eo aza ny EU tsy mamela ny Vaksinin'ny Sputnik avy any Rosia, ny Repoblika kelin'i San Marino dia mety hamokatra ny vaksinina Rosiana Sputnik any Eropa atsy ho atsy.
Izany dia ahafahan'i San Marino tonga hamonjy ny firenena eropeana hafa amin'ny fanomezana vaksinin'ny COVID-19 tena ilaina.
San Marino dia manana fifandraisana tsara amin'ny Federasiona Rosiana ary tsy nankato ny sazy avy any Eraopa.
Nampahafantarina ity vaovao momba ny baomba ity eTurboNews amin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny filohan'ny WTN ary eTurboNews Juergen Steinmetz, mpanonta, ary ny masoivohon'i San Marino any UAE, ny Hon. Mauro Maiani. Andriamatoa Maiani koa dia Lehiben'ny Sampan-draharaha Iraisam-pirenena an'ny Minisitra of Tourism of San Marino ary mpikambana ankehitriny ao amin'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany.
San Marino dia firenena voahodina amoron-tany misy teratany 33,986 ary voahodidin'i Italia tanteraka. Ny Repoblikan'i San Marino dia iray amin'ireo repoblika tranainy indrindra manerantany. Izy io dia manana rafitry ny governemanta efa zato taona mahery, ary lalàm-panorenana nosoratana tamin'ny 1600.
“Tsy mpikambana ao amin'ny Vondron Eropeana izahay”, hoy ny fanazavan'ny Ambasadaoro. ”Manana fifanarahana amin'ny fadin-tseranana miaraka amin'i Italia izahay ary mahazo mampiasa ny Euro ho volanay. Manana fifandraisana sariaka be amin'ny Federasiona Rosiana koa izahay ary nandray mpizahatany rosianina maherin'ny 300,000 tamin'ny taona 2019. ”
"San Marino dia tsy nanohana ny sazy farany nataon'ny vondrona eropeana hanohitra an'i Russia."
Ireo namana any amin'ny toerana avo, Andriamatoa Putin dia nanapa-kevitra ny hivarotra an'i San Marino ampy amin'ny Vaksinin'ny Sputnik, ka i San Marino no lasa firenena nanao vaksiny voalohany voalohany tany Eropa.
San Marino dia niandry ny fiasan'i Italia alohan'ny nitodihany tany Russia. Raha ny filazan'Andriamatoa Maiani dia nanaiky ny handefa vaksininy iray isaky ny vaksinina 1,750 voaray any San Marino i Italia. Ity dia momba ny fifandraisan'ny mponina any Italia raha oharina amin'i San Marino.
Tsy nisy na dia vaksinina iray aza tonga avy tany Italia, ary miaraka amin'ny aretina avo indrindra fahefatra eran'izao tontolo izao (mifototra amin'ny isan'ny mponina), San Marino dia tsy maintsy nanao zavatra ary nanapa-kevitra ny hanavotra ny olom-pireneny.
"Nirotsaka an-tsitrapo ho anisan'ny fianarana voalohany aho ary nahazo ny Vaksinin'ny Sputnik." Mandritra izany fotoana izany, ny olom-pirenenan'i San Marino dia nifindra tamin'ny toerana ratsy indrindra eran'izao tontolo izao tamin'ny fanaovana vaksiny ho amin'ny tsara indrindra.
Mety namonjy ny ain'ny maro tany San Marino i Russia. 4,586 ny tsimokaretina COVID amin'ny olom-pirenena 33,986 no nametraka ity firenena laharana faha-4 manerantany ity. San Marino no firenena fahatelo maty indrindra nahatratra 2,501 ny fahafatesan'olona iray tapitrisa. I Gibraltar sy ny Repoblika Tseky ihany no manana tahan'ny fahafatesan'olona bebe kokoa.
Amin'ny maha sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha azy dia nilaza tamin'ny mpikamban'ny World Tourism Network i Dr. Taleb Rifai fa matetika ny firenena no mitokana.
Hitan'i Russia izao ny fotoana ahafahan'ny orinasa mivarotra ny Sputnik any Eropa, ary mety hanaiky i San Marino. Hatreto i Sputnik dia tsy manana zavamaniry any Eropa Andrefana, ka toerana aiza no mety ho tsara kokoa noho ny firenena tsy miankina EU izay voahodidin'ny Vondrona eropeana.
Ny minisitry ny fahasalamana San Marino sy ny minisiteran'ny raharaham-bahiny dia eo am-pandinihana ny tolo-kevitra ho an'i Russia hanangana orinasa Sputnik ao amin'ny Repoblikan'i San Marino. Bulgaria, Hongria, ankoatry ny firenena hafa dia efa mety ho mpanjifa sahady ary mety hanohitra ny politikan'ny EU ary hividy ny Vaksinin'ny Sputnik Rosiana raha vokatra any San Marino.
Henoy ny tafatafa;
Mitaky 9% ny entana entana amin'ny habakabaka amin'ny volana Febroary raha oharina amin'ny ambaratonga mialoha ny COVID